enyukele kaEnoki | Apg29
Oku kufana kunye uEnoki. "Wena sambona ithenwa, kuba lalihamba ngakumbi." Yena nje yanyamalala, azafunyanelwa ndawo.
Oku kufana kunye uEnoki. "Wena sambona ithenwa, kuba lalihamba ngakumbi." Yena nje yanyamalala, azafunyanelwa ndawo. Ngoko ke iya kuba xa uYesu ufumana intsapho yakhe emhlabeni. Ekhohlo Uyakuqaphela kuphela ukuba abantu zimhambele.
Baphamzela ngamadlelane noThixo
Nangabo uEnoki, owesixhenxe ukususela kuAdam wayeyindoda bahamba nobudlelwane noThixo. impilo yakhe yonke, ukuba ukuthanda kweNkosi. Sifunda ngaye Ke, amaHebhere. 11: 5:
"Ngokholo uEnoki wafuduselwa emazulwini ukuba angaboni kufa; waza wamfumana akukho ngakumbi uThixo wayethabathe ngenxa. Kuba ngaphambi kokufuduswa kwakhe, waba wangqinelwa ukuba umkholise kakuhle uThixo. "
UEnoki akazange afe
I-Abheli olilungisa, njengoko kubhalwe kule vesi yangaphambili wabulawayo uKayin umzalwana wakhe, wafa ngenxa yokholo lwabo. Kodwa uEnoki akazange afe konke konke.
E nuBibeln uthi, "ukuba nako ukumfumana," yaye translation 1917: "bambona kuye ngakumbi."
Ukuba khange ufumane uEnoki, okanye ngaba kufuneka kuthetha ukuba lalifuna yena, kodwa ngaphandle impumelelo. Yena ke wahlala elishiyiweyo.
Xa ayobe kwenzeka, isihlwele waka abantu umkhondo shwaka akwabakho ehlabathini. Ngayo usindiso isihlwele ukuba uYesu uye. Kuya kubakho isiphithiphithi emhlabeni. Baninzi abantu baya kuphoswa iintsapho zabo. Abo baye eseleyo ingaze ngenxa babo ababathandayo.
Kodwa abayi kufumana kuzo. Baya kumemelela bathi: "Uphi na abazali bam?", "Uphi na abantwana bam?", "Uphi na abazalwana bam?" Uphi na abahlobo bam? "
Abantu abaninzi abayi kuba bekulungele xa kusenzeka ayobe, akukho mlilo, amaKristu. Mhlawumbi bacinga ukuba imithandazo unina kunye nobomi olilungisa uYise kukunceda ukuba ezulwini. Okanye ukuba ngokwaneleyo ungonqulayo ngokubanzi, ububele okulungileyo kwaye benza konke okusemandleni abo.
Sifunda ukuba "ngokholo uEnoki wafuduselwa emazulwini." Ukuhamba noYesu ufumana nentsapho yakhe ukusuka emhlabeni kufuneka ube nokholo ophilayo kuKristu. Umele ukuba abamamkelayo njengoMsindisi wabo. UEnoki ethathwa ngokuba "wahamba ephilela uThixo, 'yaye' ukuba umkholise kakuhle uThixo."
IBhayibhile ithetha uhambo esibhakabhakeni ezintathu: anyukele kukaEnoki, nokunyukela uMprofeti kaEliya, nokunyukela kukaYesu. Thina bamanywe inkitha ngentlawulelo kwakhona kuya kwenza wenyukela ezulwini, uYesu ithengiseka nathi esebenzisa ayobe.